ဇော်ဂျီ၊ ယူနီကုဒ် 5.1 နှင့် နောက်ကွယ် ပြဿနာများ | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
ဇော်ဂျီ၊ ယူနီကုဒ် 5.1 နှင့် နောက်ကွယ် ပြဿနာများ	Posted by mm thinker on September 2, 2008
Posted in: IT & Blogging.	Tagged: IT & Blogging.	Leaveacomment
တင်ကြို စကားခံရလျှင် မြန်မာဖောင့်နှင့် ပတ်သက်သည့် ပြဿနာအရပ်ရပ်ကို နားလည်ရန် ကျနော် အလှမ်းဝေးပါသည်။ ဝီကီမြန်မာ (MOE) အကောင်အထည်ပေါ်ရေးတွင် ကျနော် ပါဝင်မိပြီးနောက် စတန်းဒတ်မြန်မာဖောင့်ကိစ္စကို ကျနော် အာရုံကျမိပါသည်။ ဒိုင်ခံရှင်းပြပေးသူမှာ ကိုငွေထွန်းဖြစ်ပါသည်။ ကိုငွေထွန်းသည် သူ့အလုပ် သူ့ပညာရပ်တွင် နှံ့စပ်သူ၊ အမြဲတမ်း သင်ယူနေသူ တစ်ယောက်အဖြစ်တွေ့ရပါသည်။
သူနှင့် ကျနော် စကားစပ်မိသမျှပြန်ပြောရလျှင် သူသည် မြန်မာယူနီကုဒ်ကို တွင်ကျယ်စေလိုသူ ဖြစ်ပါသည်။ ဒီထက်ပိုပြောရလျှင် IT ဘာသာစကားသုံးစွဲရေး၌ ကမ္ဘာသုံးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုဖောင့်ဖြင့် အနာဂတ်ကို ကောင်းစေလိုသူဖြစ်ပါသည်။ အားလုံးကို တစ်က ပြန်စရန်မဟုတ်ဘဲ သူက ဇော်ဂျီသာ သုံးစွဲနေသူလည်းအဆင်ပြေနိုင်အောင် Convert လုပ်ရေးဖြစ်ပါသည်။ ယခု ကျနော့်ဘလော့ဂ်၏ ညာစွန်အပေါ်တွင် Choose Font Here ဆိုသည့် ဘောက်စ်ကလေးကို တွေ့ပါမည်။ ဇော်ဂျီနှင့် ယူနီကုဒ် 5.1 အပြောင်းအလဲသုံးနိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။
ယူနီကုဒ်ကြောင့်ရနိုင်မယ့် အကျိုးကို Myanmar Font Converter ဘလော့ဂ်မှာ ဒီလိုရေးထားပါတယ်။
Unicode စစ်စစ်ကို သုံးလိုက်ရင် ရလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေက အလွန်ပဲများပြားပါတယ်… အများသိထားတဲ့အတိုင်း Unicode စစ်စစ်က Searchable, Sortable ဖြစ်ပါတယ်… စံတစ်ခုကိုသာ အားလုံးလိုက်နာကြရင် အထက်မှာပြောခဲ့သလို မြန်မာ Font တစ်ခု ရှိနေယုံနဲ့ မြန်မာစာ အားလုံးကို ဖတ်လို့ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်… တစ်ခြား အကျိုးကျေးဇူးတွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်…
(နောက်ပြီတော့ မြန်မာဆိုတာ ဗမာတစ်ခုတည်းကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး…ရှမ်း၊ မွန် စတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေလည်း မြန်မာတွေပါပဲ… မြန်မာစာဆိုတဲ့ နေရာမှာ တိုင်းရင်သားတွေကို ထည့်စဉ်းစားရပါမယ်… မသိချင်ယောင်ဆောင်နေလို့မရပါဘူး… Zawgyi ဆရာသမားတွေ ကောင်းကောင်းသိပါတယ်… သူတို့က တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ code point တွေကို အပိုင်စီးထားပါတယ်… အဲ့ဒါကြောင့် Zawgyi နဲ့ ဘယ်တော့မှ တိုင်းရင်းသား စာတွေ ရိုက်လို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး… Unicode စစ်ရင် ရပါတယ်… တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ပါ ထည့်စဉ်းစားပြီးသားပါ…)
ကူနီကုဒ်စနစ်ကို မလိုက်နာသော ဇော်ဂျီဖောင့်၏ ကံကောင်းအကြောင်းလှစွာ တွင်ကျယ်သွားပုံကိုလည်း အဲဒီမှာ (Click Here) ရေးထားပါတယ်။ ကျနော် လေ့လာတီးခေါက်မိသလောက် ဖောင့်အတည်ဖြစ်ရေးမှာ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားတွေ ပါနေတာ စိတ်မကောင်းစွာ တွေ့ရပါတယ်။ ဘလော်ဂါတချို့သည်လည်း အသုံးချခံများဖြစ်နေသလား တွေးမိပါတယ်။နောက်ပို့စ်မှာ ဘလော့ဂ်ပေါ် ဇော်ဂျီ-ယူနီကုဒ် 5.1 Convert ထည့်ပုံကို ထပ်ညွှန်းပါ့မယ်။
မြန်မာစာပေ တိုးတက်စေလိုသော စေတနာဖြင့်
← လတ်တလော ကိုယ်ထင်ရာ	ဇော်ဂျီ-ယူနီကုဒ် 5.1 ပြောင်း Box ထည့်ခြင်း →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...